UAndrew Kim, umyili weXbox One S etyikitywe nguTesla | Iindaba zeGajethi
UTesla uyaqhubeka nokuthetha kuyo yonke intshukumo yakhe kwaye ngoku uyakwenza oko ngokutyikitywa kwakutshanje komnye wabayili abaphambili beMicrososft kumaxesha akutshanje, U-Andrew Kin, osayinwe yinkampani ka-Elon Musk, u-Tesla. Utshintsho alukho mbi, kude nayo, uKim uya kuba yinxalenye yeqela loyilo lweTesla, kodwa hayi njengelinye leqela kuba isikhundla sakhe iya kuba sesoMyili oyiNtloko wophawu.
Kude kube namhla nasemva kokwenza iprojekthi yeXbox One S, uKim wayengomnye wabayili abaphethe iiHoloLens kwaye ngoku wenza umtsi kwinkampani yefashoni. Ngokubhekisele kwinqanaba lomyili kunye neqela laseRedmond, iiHoloLens azinabungqina bomsebenzi okanye uphawu azakushiya kubo ngoku sele emkile, kodwa akukho mathandabuzo ukuba kwikhonsoli ukuba unomsebenzi owenzileyo kwaye sicinga ukuba ngumsebenzi olunge kakhulu.
Umzali umzali UTesla uzingqonge ngeqela elinomtsalane bobabini iinjineli kunye nabaqambi, ke oko kusikhumbuza kancinci ngento eyenziwe nguApple kwithuba elidlulileyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba neqela elifanelekileyo lomsebenzi kubalulekile kwezi nkampani zinkulu kwaye yiyo loo nto zihlala zigcina ezona zibalaseleyo.
Izizathu zokuhamba kukaKim azichazwanga esidlangalaleni kodwa ufumene iinkcukacha kuMicrosoft ngohlobo lwe I-Xbox isayinwe liqela loyilo iselfowuni kwaye uyithumele kwiakhawunti yakhe ye-Instagram. Kuyabonakala ukuba sijamelene noqhankqalazo ngokuzithandela kwaye kufuneka sihloniphe esi sigqibo. Masibone ukuba iya kuba nakho ukwenza ntoni eTesla, kodwa amandla abonisiweyo ngokwendlela yoyilo kubonakala ngathi kunomdla kuthi ukungena kwinkampani kaMusk.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Umyili weXbox One S u-Andrew Kim ujoyina iTesla
IXiaomi Mi5C iya kuxabisa ngaphantsi kwe-euro ezingama-140 ngokokuvuza okutsha